“Sɛ anka wode me bɛsie damena mu
de me ahinta kɔsi sɛ wʼabofuo bɛtwam!
Sɛ anka wobɛhyɛ me berɛ
Sɛ onipa wu a, ɔbɛba nkwa mu bio anaa?
Mʼaperedie nna mu nyinaa
mɛtwɛn akɔsi sɛ me foforɔyɛ bɛba.
Wobɛfrɛ na mɛgye wo so;
wʼani bɛgyina abɔdeɛ a wo nsa ayɛ.
Afei wobɛkan mʼanammɔntuo